Apple ma ahan mid soo jiidanaysa shaqaalaha | Waxaan ka socdaa mac
Ugu yaraan, taasi waa waxa ka soo baxa qiimeyntii ugu dambeysay ee sanadlaha ah «Meelaha Ugu Fiican ee Laga Shaqeeyo» (Meelaha Ugufiican ee Lagu Shaqeeyo) by Glassdoor, kaas oo dhigaya Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay meeshii ugu hooseysay tobankii sano ee la soo dhaafay. Sannadkan, Macs iyo iPhone sameeye wuxuu u dhacay lambarka 83, oo aad uga fog Top 10-ka oo ay inta badan iska leedahay.
Qiimeynta lagu soo gabagabeynayo go'aannadan waxaa lagu fuliyaa si qarsoodi ah shaqaalaha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka, waxayna muujineysaa in xaaladaha shaqada ee shirkadda Californian aysan gaarsiisneyn heer weynaanta teknolojiyad sare.
2017 waxaa lagu xusuusan doonaa astaamo badan oo cusub iyo horumarin ay sameysay shirkadda Apple. Laakiin sidoo kale sababta oo ah rikoor xun. Waa markii ugu horreysay ee Apple ay hoos uga dhacdo booska 36 ee liiskan., tan iyo markii daraasaddan ay bilaabatay 2009.
Qayb laga soo qaatay warbixinta sahanka "Meelaha ugu Fiican ee Lagu Shaqeeyo", halkaas oo aan ka arki karno booska ay heshay Apple.
Taa bedelkeeda, shirkadaha ugu fiican ee ka shaqeeya liistadaan waa:
Bain & Shirkad.
Kooxda Boston Consulting Group.
Sida aan arki karno, Google waxay ku haysaa booskeeda 10ka ugu sarreeya, wax Apple ayaa gebi ahaanba dayacay. Sidaas darteed, wuxuu khatar ku dhow yahay inuu ka baxo 100-ka sare sanadka soo socda ee 2018.
Kala soocyadan waxay ku saleysan yihiin algorithm ee Glassdoor, kaas oo qiimeeya tirada, tayada iyo joogtaynta dib u eegista shirkad kasta oo daraasad ku socota waxaana ku jira awoodaha leh dhibco gaaraya ilaa 5 xiddigood. In kasta oo ay ka fog yihiin jagooyinka sare, si macquul ah, Apple wuxuu helay sanadkan 4.3 xiddigood 5tii xiddig, wax aan ka fogayn Facebook, kaalinta koowaad ee kala-saaridan, oo heshay 4.6 / 5.
Hagaajinta diiwaanada ay heshay Apple, Waxaa jira shirkado badan oo teknoolojiyad ah oo ka adkaaday shirkadda tufaaxa sanadkan. Tusaale ahaan, LinkedIn safka lambarka 21, Nvidia waxaa la dhigayaa 24, Adobe 31, Micrsosft gudaha 39, iyo Yahoo ee 65.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple mar dambe uma qurux badna shaqaalaha
Safari ee macOS wuxuu raadiyaa dhammaan tabs furan